High Ike Mere
Ikanam Ọka Light Case
Ikanam AKWA BAY Case
Ikanam Street LIGHT Case
Ikanam Iju Mmiri LIGHT Case
Ọwara LIGHT Case
Ikanam Street ìhè
C Series Street ìhè
E Series Street oriọna
S usoro uzo ìhè
All ke kiet ke otu anyanwụ mere n'okporo ámá ìhè
Ikanam ọka ìhè
ETL ọka oriọna usoro
Waterproof ọka oriọna
Mini usoro ọka oriọna
Ikanam Shoebox Light
Ikanam Iju Mmiri ìhè
A Series UFO elu n'ọnụ mmiri ìhè
C Series UFO High n'ọnụ mmiri Light
D usoro UFO High Bay Light
E usoro UFO highbay ìhè
L Series UFO Highbay ìhè
Ikanam Wall mkpọ ìhè
Ikanam modul Light
Dugara Ọwara Light
B usoro Dugara Ọwara Light
C usoro Dugara Ọwara Light
Ikanam tube Light
Ikanam bọlbụ Light
Gịnị bụ a ọka ìhè?
Development usoro nke Street ìhè
Stadium ọkụ ngwọta
Akwụkwọ ikike Issue
Gịnị ka Ikanam ada?
Ikanam dị mkpụmkpụ maka ìhè-emitting diode.
Olee ogologo oge LEDs adịru?
LEDs bụ ọwọrọiso n'ihi ịbụ nnọọ na-adịgide adịgide na ngwaahịa. Ọtụtụ LEDs nwere a gosiri ndụ nke ruo 50,000 awa. Nke a bụ ihe dị ka ugboro 50 ogologo oge karịa a typical incandescent, 20-25 ugboro aba karịa a typical halogen, na 8-10 ugboro aba karịa a typical CFL. Jiri 12 awa a ụbọchị, a 50,000 bọlbụ ga-adịru karịa afọ 11. Eji 8 awa a ụbọchị, ọ ga-adịru afọ 17!
Ebe ike LEDs ga-eji?
Ha ga-eji nke fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla. Ikanam edochi anya na-ama maka bọlbụ ụdị dị ka A-udi, pa reflectors, MR reflectors, ji achọ, undercabinet, na ndị ọzọ. Mgbe e ji on dimmers, karịsịa dimming na sistemụ na-akwado ọtụtụ bulbs, anyị na-atụ aro na-anwale a ole na ole LEDs mbụ nwalee ndakọrịta.
Gịnị bụ uru nke ịmafe ikanam?
The uru nke ịmafe ikanam dị ọtụtụ. Ndị a bụ nanị ụfọdụ n'ime uru: LEDs iji ọtụtụ obere ọkụ eletrik karịa ndị ọzọ bulbs, nwere nnọọ ogologo gosiri ndụ, na-emepụta obere okpomọkụ, adịghị emit UV ma ọ bụ infrared, nwere dịghị mercury, na-eguzogide ọgwụ ujo na vibration, na ike na-arụ ọrụ n'ụzọ dị irè na oké oyi na-atụ gburugburu. Maka ozi ọzọ uru nke ikanam,
Gịnị mere LEDs-eri ihe karịrị ndị ọzọ ụdị bulbs? Ọ bụ na ha kwesịrị ya?
Ikanam bụ ka a ọhụrụ technology, na-efu nke na-amị quality ngwaahịa bụ ka elu. Otú ọ dị, ịnye ọnụahịa arịdakwuruwo n'ụzọ dị ịrịba ama si na afọ ole na ole gara aga na ahịa na-atụ anya na-anọgide na dobe. Na okwu nke ma LEDs ọfọnde mmezi-eri, ọ bụ aka anya na ndị na-eri na-arụ ọrụ a bọlbụ na mgbakwunye na nke elu-n'ihu na-eri. The ike ego ghọtara na a mgba ọkụ na ikanam pụtara na extra elu-n'ihu na-eri a na-akwụ ụgwọ azụ kama ngwa ngwa, na ị ga-ifufe na-azọpụta ego n'elu ndụ nke bọlbụ. Lee otu ihe atụ: n'ihi na a residential ahịa onye nwere ìhè n'ihi na dị nnọọ 10 awa kwa izu n payback bụ ihe karịrị 10 afọ. N'aka nke ọzọ, a retail ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahịa onye na-ere ọkụ ọkụ nke 90-100 awa kwa izu ga-gbakọọ ha payback na a $ 70 Ada pa na-erughị ọnwa 18. Inweta a anya gị payback atụmatụ ga-hoo haa na-a echiche mgbe ị na-ekpebi ma ọ bụrụ na ikanam bụ nri maka ị.
Ò nwere ihe dị iche n'etiti a $ 10 Ada na a $ 50 Ikanam?
Ee. LEDs ndị yiri nnọọ ka n'ji ngwá electronic na àgwà dị mkpa n'ezie. Ka ihe ikanam arụ ọrụ nke ọma na-enye ihe na-anabata ìhè mmepụta, ihe nile nke mmiri ga-ewu-adịru. Ọ bụ mgbe niile a ezi echiche ịzụta si a emeputa na-ere ahịa na ị na-obi ike ga-ada n'azụ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị ga-amasị iji mụtakwuo banyere ndị mmiri na otú cheaply mere LEDs tojupụtara elu megide n'elu-quality ngwaahịa,
Na-na-ikanam aga na-emepụta ezu ìhè dochie m ugbu a na-bọlbụ?
N'ihi na ọtụtụ ngwa, ee. Off-na-na shelf Ikanam ngwaahịa na-now reliably dochie incandescent kachasị yitebe nke ruo 100 watts, na ọpụrụiche na ngwaahịa ndị dị dochie ọbụna elu wattages.
Gịnị bụ àgwà nke ikanam ìhè?
Ọ bụrụ na ịzụta àgwà ngwaahịa, ìhè quality bụ magburu onwe. Agba Rendering Index (CRI) na-eji tụọ ìhè quality na a ọnụ ọgụgụ si 1-100. Kasị LEDs nwere a CRI fim nke dịkarịa ala 80, na ọtụtụ ndị e gosiri na 90 na n'elu.
Olee green bụ LEDs?
LEDs dị nnọọ green. N'ihi na EBIDO, ha na-eji ọtụtụ obere ọkụ eletrik karịa ọtụtụ ndị ọzọ na ọkụ ngwaahịa. Nke a pụtara na obere ọkụ eletrik nwere na-emepụta na-arụ ọrụ ha, ma na-akpata ala umu anwuru si ike osisi, karịsịa ebe coal-chụọ n'ọrụ osisi a na-ahụkarị. N'adịghị ka CFLs, ha nwere dịghị mercury. N'ihi na nke ha ogologo ndụ, ha na-belata siri ike n'efu: Ọ bụrụ na ị na-eji dochie ihe incandescent bọlbụ na ikanam, ị ga-egbochi ndị agha iri ise 1,000 hour incandescent bulbs si a tụba pụọ. Ọzọkwa, ha na-nnọọ nta okpomọkụ na ike belata ike ojiji metụtara HVAC. The US Department of Energy ka atụmatụ na ụba doro nke LEDs n'elu ọzọ afọ 15 ga-belata ọkụ eletrik choro site na ọkụ site 62 percent, gbochie 258 nde metric tọn carbon umu anwuru, na akagbu mkpa maka 133 ọhụrụ ike osisi.
Nwere ike LEDs ga-eji na dimmers?
Emekarị, ee. Ọtụtụ LEDs-kpọmkwem depụtara dị ka ndị dimmable. Ụfọdụ dimming usoro-arụ ọrụ na LEDs mma karịa ndị ọzọ, n'ihi ya, ọ bụ ihe kacha mma na-anwale ma ọ bụ abụọ tupu kpamkpam re-lamping a ohere.
Ga LEDs ga-eji na nchọ fixtures?
Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ha na-kpam kpam nchọ. Ka ihe ikanam na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ha ga-adị na a na-abụghị nchọ eletrik na allo
Adress: 3rd n'ala, D ụlọ, 12 # Jinyuan mbụ ụzọ, Heao, Henggang, Longgang district, Shenzhen, China
Ekwentị: + 86-755-89313334
MAỊ 720w iju mmiri lignting maka Austria stadi ...
© Copyright - 2010-2018: All Rights echekwabara. PCB nzukọ
Online ahịa ọrụ
Online ahịa ọrụ usoro